Ọrịa na - akpata ọrịa - gịnị ka ọ bụ, dịka e gosipụtara na ụmụ nwanyị? Ọrịa na-ahụ maka ọnya - ọnụọgụ abụọ
Ọrịa na-akpata ọrịa - iji belata ihe niile na-egosi na ụmụ nwanyị?
Usoro mkpochapụ nke usoro ọmụmụ n'ime nwanyi nwere ike were ọtụtụ afọ. A ga-ahụ ihe mgbaàmà mbụ nke ihe a na-egosi ogologo oge tupu nkwụsị nke nsọ nsọ. A na-akpọ ọtụtụ ihe ịrịba ama na ngosipụta nke usoro a ọrịa strokeric.
Ọrịa Climaceric - gịnị ka ọ bụ?
Ọrịa na-akpata ọrịa - nchikota nke mgbaàmà, ihe ịrịba ama na ihe ngosi, nke na-egosi njedebe mmebi nke usoro ọmụmụ. Ihe mgbaàmà mbụ nke ọrịa ahụ na-apụta n'oge a na-ahụ maka oge mbụ ma na ụfọdụ na-anọgide na-abụ ndị inyom postmenopausal . Oge nke ọrịa a nwere ogologo oge - ọ ga-adịgide site n'ọtụtụ ọnwa ruo 5 (30% nke ụmụ nwanyị).
N'ime ọkara nke ndị ọrịa, ihe mgbaàmà nke ndị na-eme mpụ na-egosipụta onwe ha mgbe ụfọdụ. Mgbe ọrịa na-egbuke egbuke n'ime ụmụ nwanyị, ihe mgbaàmà ahụ gosipụtara na ngosipụta n'elu oge 5-10. Dika nkwuputa ahuike na mkpesa ndi nwanyi na-adi ha mma, a na-ekwuputa ihe omuma nke oria mmikpo n'ime afo tupu onwa ogugu, mgbe ahu ike ha na ibelata. Otú ọ dị, ọhụụ zuru ezu adịghị eme.
Ọrịa Climaceric - pathogenesis
Iji ghọta otú ọnyá na-esi pụta ìhè, ọ dị mkpa ịṅa ntị na isi ihe na-akpali akpali. Ihe kpatara mgbaàmà nke na-egosi mmalite nke menopause bụ mgbanwe na nzụlite hormonal. N'ime ụmụ nwanyị, enwere ọnụ na njikọ nke homonụ mmekọahụ - estrogens. Ihe ndị a abụghị nanị na-achịkwa ọrụ nke usoro ọmụmụ, kamakwa ọ na-emetụta akụkụ ndị ọzọ. A na-egosi na ha ezughị oke na ọrụ nke usoro obi na ọrịa na-ahụ anya (mmebi nke akụkụ ndị a na-edozi n'oge menopause).
Ekwesiri iburu n'uche na mgbanwe nke ụdị a bụ àgwà ndị inyom niile tozuru okè. Otú ọ dị, oge nke ọdịdị ha, ogo okwu nwere ike ịdị iche. N'ọnọdụ ụfọdụ, enwere ike ịhụ ọrịa a na-ahụ maka ọrịa ahụ, mgbe a na-akpọ ihe mgbaàmà ahụ ka ha gbanwee ụzọ ndụ ha. Mmebi nke ọdịda ọmụmụ nke usoro ọmụmụ, dị ka ndị ọkà mmụta sayensị, nwere ike inye aka na ihe ndị na-esonụ:
arụ ọrụ mgbe niile, ọnọdụ ọrụ siri ike;
ọnọdụ nchekasị, nsogbu nke endocrin na etiti nchebe nke etiti;
nsogbu na puerperium na n'oge ime ime;
ihe na-egbu nje na akụkụ pelvic;
Kedu ka ọrịa nwokeopausal si egosi na ụmụ nwanyị?
Ihe mgbaàmà mbụ nke ọrịa ọrịa na-egbuke egbuke na-egosi ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ozugbo ọ kwụsịrị ime nsọ nsọ ma ọ bụ n'ime afọ ahụ na mụọ ndị nwoke. Ọtụtụ mgbe, ndị dọkịta na-edozi ụzọ, mgbe isi ihe mgbaàmà, na-apụ n'anya ruo nwa oge, ga-apụta ọzọ. Ihe ngosi nke njirimara nke ọrịa na-egbuke egbuke bụ ọrịa na-arịa ọrịa neuropsychic bụ nke mmeghasị nke usoro nhụjuanya nke etiti. N'etiti ihe omume ndị ọzọ, ndị dọkịta na-akpọ:
nsogbu na-eme nyocha.
Ngosipụta uche nke ọrịa strokericeric
A na-ekwukarị ìgwè nke mgbaàmà ndị a na-egosi mgbu ndị mmadụ kpatara nsogbu nke usoro nhụjuanya nke etiti. Ihe ịrịba ama mbụ nke ụdị ndị inyom a na-amalite ịhụrịrịrịrị mgbe njedebe nke ime nsọ nsọ mgbe nile. Ịmanye hormones na ọbara na-ebelata, nke a na-edugakwa na ịmalite imegharị oge, mmepe nke ehighi ura. Ngosipụta obi-na-neurotic nke ọrịa na-ejide onwe ya na-agụnye:
ọdịdị nke egwu;
ike na-arịwanye elu;
ọchịchọ agụụ mmekọahụ na-ebelata.
Ngosipụta na-adịghị mma nke ọrịa ọnya
Ihe na-egosi vegetative nke ọrịa strokericel na-akpata site na nkwụsị nke usoro obi. Mgbanwe ngwa ngwa n 'ọbara mgbali elu, mmụba nke ọsụsọ, imebi ụda obi na-eme ka ọdịdị nke njirimara pụta ìhè. Ndị a bụ:
ọkụ na-ekpo ọkụ - mmetụta mberede nke okpomọkụ, ya na reddening akpụkpọ ahụ;
enwe mmetụta nke nhụjuanya n'aka;
na-agbanwe ngwa ngwa na mgbali elu.
Ọrịa na-ahụ maka ọnya - oke
Na omume, ndị dọkịta na-eji ụfọdụ nhazi. Onye edemede ya bụ VP Vikhlyaeva. Ndabere bụ nkewa nke ọrịa na-ebute ọnyá na ogo dịgasị iche iche, dabere na ugboro ole ọdịdị mmiri dị:
1 ogo (ụdị ìhè) - mgbe ọnụ ọgụgụ nke mmiri ozuzo kwa ụbọchị anaghị erute 10 ngosipụta (pụtara na 47% nke ndị ọrịa).
2 ogo (oke oke) - ọnụ ọgụgụ nke mmetụta mberede nke okpomọkụ, mmiri ozuzo bụ 10-20 ngosipụta kwa ụbọchị (35% nke ụmụ nwanyị).
3 ogo, ma ọ bụ dịka a na-akpọ ya, ọrịa siri ike - nke na-ekpo ọkụ dị ọkụ karịa iri ugboro abụọ n'ụbọchị. Ọnọdụ nke ahụike na-akawanye njọ, mgbe ụfọdụ, nwanyị ahụ enweghị ike ibute ụzọ ndụ na-emekarị ka a na-agwọ ya n'ụlọ ọgwụ.
Ọrịa na-akpata ọrịa - nyocha
Kwenye na enwere ike ịmịkasị na ụmụ nwanyị nwere ike ọ bụ naanị site na nchọpụta diagnostic, ụfọdụ ihe ịrịba ama na mgbaàmà ezughị. N'ozuzu, nyocha nke mmebi ahụ anaghị akpata nsogbu. Ọ gụnyere:
Ịtụle maka oge ma ọ bụ enweghị oge dị otú a nke oke oge.
Ọbara ọbara maka hormones.
Mwepu nke ọrịa nkwonkwo nke usoro ọmụmụ, nke nwere ike inwe mgbaàmà yiri nke ahụ na ndị ahụ akọwapụtara n'elu.
Nyocha nke onye na-agwọ ọrịa, oculist (nyocha nke ọnọdụ nke fundus), endocrinologist.
Ọrịa na-akpata ọrịa - ọgwụgwọ
A ghaghị imezi ọgwụgwọ ọrịa na-egbuke egbuke n'ụzọ dị mgbagwoju anya. Ndị dọkịta na-emepụta atụmatụ nke ọgwụgwọ, na-eburu afọ ole onye ọrịa ahụ, ogo oke mgbaàmà, ọnọdụ ọnọdụ homonụ. N'ọtụtụ ọnọdụ, ọgwụgwọ na-amalite site n'inwe usoro ndụ dị mma - ịjụ àgwà ọjọọ, imega ahụ dị elu. Ọ bụrụ na ị na-eme ihe dị ka minit ise, ọ ga-enyere gị aka ma ọ bụghị naanị belata nrịanrịa nke ọnyá ọrịa, ma mee ka arụmọrụ nke usoro obi.
Ọrịa na-ahụ maka ọnya - ọnụọgụ abụọ
Ọ bụrụ na nwanyị nwere ọrịa nkwụsị, ndị dọkịta na-enye ndụmọdụ banyere otu esi emeso ya nanị mgbe ha jesịrị ọmụmụ banyere kọnesi onye ọrịa, nchịkọta data niile. Enweghị usoro ụwa niile nke nwere ike idozi nsogbu ahụ ike dị, nwere ike belata ọnụọgụ mmiri. Nke ọ bụla dị iche iche, ya mere onye dọkịta na-emepụta usoro ọgwụgwọ ahụ, na-echebara ihe ọmụmụ na nyocha ahụ pụta. N'ikpeazụ, ọgwụgwọ nke ọrịa ọnya nwere ike ịgụnye:
ọgwụ mgbanwere ọgwụ nke hormone;
ọgwụ na herbs;
eji ndi agha agha;
ịrapara na nri pụrụ iche.
Ọrịa na-akpata ọrịa - ọgwụgwọ, ọgwụ
A na-emezi ọgwụgwọ maka ọrịa menopausal na ụmụ nwanyị n'okpuru nlekọta anya nke ndị dọkịta. Ndabere ọgwụgwọ ọgwụ bụ ọgwụ ọgwụ ọjọọ. A na-ekpebi oge ọ bụla nlekọta na oge nke ọgwụgwọ n'otu n'otu. N'ime ọgwụ ndị e nyere maka imebi ahụ, dị ka ọrịa na-akpata ọrịa, ọ dị mkpa ịmata ọdịiche:
Estrogens (a na-ahọpụta na enwechaghị mmepụta site na akpanwa ha): Femoston, Divina.
Gestagens (eji edozie ọrịa nke usoro ịmụ nwa na-aga na menopause): Norkolut, Prozhestan, Utrozhestan.
Ejikọtara ọgwụ mgbochi ọnụ : Logest, Novinet.
Mgbochi nke ọrịa ọnya
Usoro nke oge a iji gbochie ọrịa menopausal na-atụ aro ka a gbanwee ụzọ ndụ na nri. Ndị ọkà mmụta sayensị egosila na iri ihe oriri na efere ụfọdụ, nwanyị nwere ike imeju ụda hormoni na-adịghị mma, na-ebelata ihe ngosi ndị na-eso ọrịa syndrome. Achọpụtara na nri nke ndị inyom dị afọ iri anọ kwesịrị ịnọ:
Otú ọ dị, ezigbo nri agaghị emeri mmepe nke ọrịa ahụ kpamkpam.
Iji belata ihe ize ndụ nke ọrịa ọrịa na-egbuke egbuke, ndị dọkịta na-adụ ọdụ:
Nyochaa nlekọta ahụ.
Kwụsị nrụgide na nchekasị uche na nchekasị.
Na-agafe ma ọ bụ na-ewere ọnọdụ na oge ruru oge ọgwụgwọ ahọpụtara.
A na-enyocha ihe mgbochi mgbe nile na onye ọkà mmụta sayensị (ọ dịkarịa ala ugboro abụọ n'afọ).
Mgbaàmà nke ime mpụ na ụmụ nwanyị mgbe afọ 50 gasịrị
Basal okpomọkụ chart
Slime si na ikpu
Ọkụ nke ovarian na - agbawa - mgbaàmà
Ndị na-ekpuchi ọrịa
Ntinye nke akpanwa na-akpata
Mgba aghara mgbe ọgwụ nje
Kedu ka e si ebute herpes genitalia?
Ntugharị n'ime akpanwa
Ọgwụ agwọ ọrịa
Ndi hyperplasia endometrial bu kansa?
Gịnị bụ estrogens na ụmụ nwanyị?
Mmekọahụ na-egwu egwuregwu
Ogige Botanical nke Mahadum Basel
Kedu otu esi eji akwa aka?
Ụdị uwe ejiji ụmụ nwanyị
Osisi n'ime ụlọ na-anaghị achọ ìhè
Tar-tar si anụ ezi - uzommeputa
Cones na chịngọm
German uwe ụdị
Kedu esi eme breeks si jeans?
Mgbanwe nke isi okwu nke ise Kim Kardashian: eziokwu na-awụ akpata oyi n'ahụ banyere ihe ndị a ma ama nke ụwa
Chicken ke Mayonezi
Achịbishọp nke Obí nke Lima
Ofe na noodles na beef
Esi esi họrọ laminate
Kedu mgbe ị ga-eme ka Jerusalem atịchok pụta?
Ejiji ejiji - N'oge okpomọkụ 2015
Igwe ntutu isi otutu